Meel aan caadi ahayn oo wanaagsan oo ku taal bartamaha Dakhliga Bulshada oo ku taal Kuliyadda Fulinta ee u dhow Main Khiyaban e Firdosi. Naqshad qurxoon leh oo ay la socoto Shaqada Farshaxanka Isbaanishka iyo Qalabka Dibedda laga keenay. Macaamiisha qaaliga ah ee ixtiraamka leh waxaan ku fulinaa dalabaadkaaga daacadnimo, Daacadnimo waxaana ku siinaynaa xarumo badan. Waxaad si cabsi la'aan ah Aamusnaan kartaa. Tilmaamaha waa: - 05 Musqulaha Masterka oo leh qubaysyo cajiib ah - 01Dajiid Casho - Qolka ciyaarista ee carruurta- 02 Qolka Quruxda leh - 02 Fortaafka Shirkadda Fofshiga - Alwaax Alwaaxiyaadka - Quruxda furan ee qurxan- Qalabka fayadhawrka ee la soo dhoofiyey- Garaash weyn oo loogu talagalay inlaast 02Cars Parking- 07 Musqusha. - Golayaal la yaab leh iyo Qolka Qufulka - Adeegga Quarter oo leh Qolka Musqusha - Qolka Bakhaarka iyo Meel Fidsan oo Nadiifsan iyo waxyaalo kale oo badan oo qarsoon ayaa sidoo kale la heli karaa, nala soo xiriir oo booqasho ku tag Gurigan. Dukaamaynta Macaamiisha #Good waa Ujeeddadeenna # WeBuildTrust # guryaha # guryahaJinnah Associates